Lo mqondo we-iOS 16 wethula isikhungo esisha sokulawula namawijethi asebenzisanayo | iPhone News
Lo mqondo we-iOS 16 wethula isikhungo esisha sokulawula namawijethi asebenzisanayo
U-Angel Gonzalez | 24/05/2022 12:00 | iOS 16
Sekusele amasonto amabili kuphela ukuthi kuqale WWDC22. Ngaleso sikhathi sizobona izinhlelo zokusebenza ezintsha ze-apula osekuphele izinyanga sikhuluma ngazo. I-iOS 16 ihlose ukuqhubeka nomklamo wayo onganyakazi iminyaka eminingana, kodwa izibophezele ekufakeni izinto ezintsha ezisebenzayo kanye nesistimu yezaziso ethuthukisiwe. Ngakho konke ukuvuza kanye nesenzakalo esithile u-Nicholas Giho ushicilele a I-iOS 16 umqondo obonisa isikrini sokukhiya esenziwa ngokwezifiso, amawijethi asebenzisanayo nesikhungo esisha sokulawula, phakathi kwamanye amanoveli amaningi esikutshela wona ngezansi.
Umqondo emva komqondo, sicabanga ukuthi yini entsha ku-iOS 16
Ngaphambi kokuqala ukuhlaziya umqondo, kufanele kugcizelelwe ukuthi ingenye eshicilelwe kakhulu kuze kube manje. Ukuhlanganiswa ne-iPhone mockups kuphumelele kakhulu futhi izici ezethulwayo zisebenza ngokugcwele. Okubi kakhulu ukuthi i-Apple ngeke izethule zonke izindaba, kungaba yimpumelelo.
Umqondo uqala ngokuthi njalo, isici esinamahemuhemu isikhathi eside. Lesi sici esihlala sivuliwe sizovumela i-iPhone ukuthi isikrini sihlale sivuliwe kodwa sifiphazwe lapho i-iPhone ikhiyiwe. Ngale ndlela singakwazi ukufinyelela ulwazi ngaphandle kwesidingo sokuthi isikrini sivuleke ngokuphelele. Okunye okufakiwe yikhono loku yenza ngendlela oyifisayo izinqamuleli zezinhlelo zokusebenza ezithile ukusuka esikrinini sokukhiya enezimpawu ngezansi.
Siqhubeka ngo-a ukudizayina kabusha kwazo zonke izithonjana ze-iOS 16 ngesitayela esihlanzekile se-macOS. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukwengeza i-App Library kudokhi kwe-iOS. Enye yezinto ezintsha esizilindele ku-iOS 16 (futhi sikholelwa ukuthi sizoba nayo enguqulweni yokugcina ye-Apple) amawijethi asebenzisanayo, izici ezikusikrini sokukhiya esingahlanganyela nazo. Izibonelo zazo: ukusebenzisana nokudlala, ngohlelo lokusebenza lwezempilo nokuningi.
Kufakwe futhi a isikhungo esisha sokulawula ukususa amagridi angu-1 × 1, kuvula ithuba lokuhlanganisa izakhi ezihlukene ezinosayizi abahlukene njengokukhanya ku-4×1. Lesi sikhungo sokulawula sifana kakhulu nalesi esiku-macOS, sibheke futhi uzobona. Okokugcina, izinguquko ezintathu ezincane ziyahlanganiswa, ezifana nokwenzeka kokuvinjwa kwezinhlelo zokusebenza ezithile, isaziso esincane esingaphazamisi sokuthi ibhethri lethu liyaphela, kanye nemodi yenkumbulo yesibali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 16 » Lo mqondo we-iOS 16 wethula isikhungo esisha sokulawula namawijethi asebenzisanayo
USebastian Vettel ujaha ngesikuta isela ebelintshontshe ama-AirPod alo ngenxa yohlelo lokusebenza "Sesha"
Ulahlekelwa i-Apple Watch ku-Disney World futhi bakhokha u-$ 40.000 ngekhadi lakhe